Yiziphi izindawo ezinesiphepho emhlabeni? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Yiziphi izindawo ezinesiphepho emhlabeni?
Iziqephu zesiphepho, okwethu thina esithanda ukubona umbani nokuzwa ukuduma, kanye namafu eCumulonimbus asondela njengoba ekhula, okunye okumangalisa kakhulu kukho konke okwenzekayo.
Ngeshwa, ngendlela efanayo engalokothi ine ngayo imvula ngokuthanda kwawo wonke umuntu, kukhona labo abangayijabulela kakhulu le micimbi. Yilabo abahlala izindawo ezinesiphepho emhlabeni.
1 Umbani weCatatumbo (Ichibi laseMaracaibo, eVenezuela)
2 I-Bogor (Java Island, Indonesia)
3 ICongo Basin (Afrika)
4 I-Lakeland (Florida)
Umbani weCatatumbo (Ichibi laseMaracaibo, eVenezuela)
Kuleli dolobha elisenyakatho-ntshonalanga yeVenezuela, phakathi koMfula iCatatumbo neLake Maracaibo, kwenzeka into eyingqayizivele eyaziwa ngokuthi umbani weCatatumbo. Yakha amafu wokuthuthuka okukhulu mpo phakathi kuka-1 no-4 km ukuphakama.
Ungajabulela le mibukiso kuze kube Izikhathi ezingama-260 ngonyaka, kuze kufike ku-10am ngobusuku obubodwa nje. Ngaphezu kwalokho, ingafinyelela ukulanda okungamashumi ayisithupha ngomzuzu.
I-Bogor (Java Island, Indonesia)
Leli idolobha eliseduze kwentaba-mlilo enkulu, esiqhingini saseJava, e-Indonesia. Lokhu kungenzeka Izinsuku ezingama-322 zesiphepho minyaka yonke. Yize iningi lenzeka e-volcano, uma sifuna indawo enesiphepho, yiBogor leyo. Kukhona izivunguvungu cishe nsuku zonke!
ICongo Basin (Afrika)
Kule ngxenye yomhlaba, ikakhulukazi edolobheni laseBunia (Republic of Congo), izakhamizi zingabona kuze kufike Iziphepho ezingama-228 ngonyaka. Akuningi njengaseBogor, kepha kungaphezulu kakhulu kwalokho esingakubona eSpain okuphakathi kwezinsuku eziyi-10 nezingama-40, kuya ngendawo esikuyo.
Edolobheni laseLakeland, eliseFlorida (United States), ngaphezu kokuba namathafa amahle kakhulu, bangaziqhayisa Izinsuku ezingama-130 zokwenza i-toementa unyaka.
Ngakho-ke manje uyazi, uma ucabanga ukuchitha izindawo ezimbalwa ezinhle kwenye indawo, vakashela noma yiziphi kulezi engizibalile futhi ngokuqinisekile uzoba nesikhathi esimnandi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izithombe » Yiziphi izindawo ezinesiphepho emhlabeni?
Ukufudumala kwembulunga yonke kuzoholela abaseMelika ukuthi basebenzise kakhulu
Ukuguquka kwesimo sezulu kuzokwenza uchungechunge lokudla lungasebenzi kahle